Fayras ayaa laga helay qaybta Sardinia qaybta 3 muuqaalka FSX
Fayras ayaa laga helay qaybta Sardinia qaybta 3 muuqaalka FSX sano 3 3 bilood ka hor #460
Aniga kaliya ayaa laga saaray xaruntii AVG. Waxay u egtahay in fayraska ama wax la mid ah ay ku jiraan gudaha rakibaha.
Fadlan la soo xirriir qoraaga oo laga yaabo in aad iska ilaaliso soo-celinta dheeraadka ah ilaa inta aad joogto
Fayras ayaa laga helay qaybta Sardinia qaybta 3 muuqaalka FSX sano 3 3 bilood ka hor #461
Looma baahna inaad walwal qabto, waad ku kalsoonaan kartaa in taasi ay si fudud kuugu ogaanayso software-ka anti-virus. Fayraskayga Aven anti-virus, ayaa si sax ah u sameeya. Sababaha qaar ka mid ah scaners ayaan ku faraxsanayn faylka rakibaha faylka ah ee lagu bixiyay galka dabiiciga. Waxaan dareemay in tani ay dhacdo badanaa dhacaya Avast tan iyo markii ay cusboonaysiisay software dhowr bilood ka hor. Software hadda waa mid aad u xasaasi ah, leh faylasha badan oo si buuxda aan dhib lahayn! Waxan ka shakisanahay dhibaatada isku midka ah ee AVG.
Si kastaba ha noqotee rajo kuugu kalsoon. Waxaad ubaahan tahay inaad joojiso tarjumaaddaada AVG ee saacadaha 10 ama si kale, si aad ugu faraxsantahay rakibidda. Muuqaal Sardinia ah oo aad u fiican, IMHO waxay ku haboon tahay in lagu daro tijaabadaada. Dhammaan kuwa ugu fiican.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: rikoooo, xayeysiis